Barre Hiiraale oo looga itaal roonaadey dagaalkii maanta, una wareegay Qudbiga iyo Suuqii hore ee Xoolaha Kismaayo ee duleedka Kismaayo – idalenews.com
Dagaal ka dhacey magaalada Kismaayo gaar ahaan goobaha ay ku badan yihiin taageerayaasha Barre Hiiraale iyo Iftiin Baasto isla markaasina geystey qasaaro balaaran oo dhimasho iyo dhaawacba leh ayaa u muuqda mid hadda qaboobey, ka dib markii ciidamada Maamulka Jubaland ee Axmed Madoobe ay ka itaal roonaadeen dhinacyadii isbaheysiga Col. Barre Hiiraale, Iftiin Xasan Baasto iyo Buraale oo isku dhinac ahaa.
Waxaa gabi’ ahaanba hawada ka baxey idaacad gaar ah oo uu lahaa Barre Hiiraale waxaana goobihii uu dagaalka ka dhacey oo dhan gaaf wareegaaya ciidamada maamulka Jubaland ee Axmed Madoobe iyadoo dhamaan goobihii ay taageerayaasha Barre Hiiraale kaga sugnaayeen warshada Hilibka Kismaayo, Xaafad Guulwade, Siinaay, iyo Dalcada ayaa hadda kuwa degan oo ciidamo daacad u ah Axmed Madoobe ay jogaan.
Col Barre Hiiraale ayaa la sheegayaa in uu hadda ku sugan yahay duleedka magaalada Kismaayo gaar ahaan meesha loo yaqaano Qudbiga Jabarti oo u dhow Suuqii Naadada Xoolaha ee duleedka Kismaayo.
Warar aan la xaqiijin ayaa sheegaaya in Barre Hiiraale uu dhaawacmey dagaalkii maanta, waxaana la sheegay in dagaalka maanta ay ku wehlinayeen Iftiin Buraale iyo Iftiin Baasto oo iyagu dagaal qaraar laga galey maamulka Jubaland ee Axmed Madoobe.
Isgaarsiinta magaalada oo aad u xun iyo korantada magaalada oo gabi ahaanba maqan, Shacabka magaalada ay teleefoonadii ka dhaceen ayaan suurtogal aheyn in wareysiyo la yeelana qeybaha magaalada ku dagaalamey. balse barta idale news ayaa idiin soo gudbin doonta waxyeelada uu dagaalkii geysey iyo weliba halka dagaaladu maraayaan.